Madaxawynaha Ruwanda PaulKagame : Xuquuqul insaanka Reer Galbeedka ‘waa wax lagu qoslo’ | Biyoguurenews.com
Home Wararka Madaxawynaha Ruwanda PaulKagame : Xuquuqul insaanka Reer Galbeedka ‘waa wax lagu qoslo’
Madaxawynaha Ruwanda PaulKagame : Xuquuqul insaanka Reer Galbeedka ‘waa wax lagu qoslo’
Madaxweynaha dalka Rawanda ayaa wax lagu qoslo iyo fajac ku tilmaamay aragtida xuquuqda aadanaha ay ka qabaan dalalka reer Galbeedka, wuxuuna ku tilmaamay dareen beer laxawsi ah oo been abuur ku salaysan.
Isaga oo waraysi siinayay taleefishin Faransiiska laga leeyahay ayuu yiri “Yurub waxa ay ku xad gudbaysaa xuquuqda dadka, waxaad arki kartaa dadka inta doomaha lagu guro lagu celiyo badda oo ay halkaas ku dhimanayaan, iyo dadka tirada badan ee dalkooda lagu waxyeeleeyay”.
Waxa uu dood la galay daadiyihii barnaamijka , isaga oo reer Yurub ku tilmaamay kuwa xad gudubyo badan.
Waxa uu intaas ku daray in reer Yurub isla qab weynyihiin, taasna ay ugu wacantahay eedeymaha ay u jeediyaan dalalka Afrikaanka ah.
“Waxaad u baahantihiin in aad joojisaan isla qab weyninka iyo maalaa yacniga xuquuqda aadanaha ku saabsan” ayuu yiri.
“Waxaad u malaynaysaa in aad idinku tihiin kuwa kale ee daryeela xuquuqda islaamka, dadka kale oo dhana ay ku xad gudbanayaan, maya, sidaas ma ahan, waxaan u dagaalanay xuquuqda iyo madax banaanida dadkeena in ka badan inta aad u dagaalanteen dadka, idinka oo markasta ka hadla waxa aan nuxur lahayn.
Previous articleXukuumada xamar oo Joojisay Wadhadalkii ay Ku blan sanaateen Somaliland
Next articleAfhayeen barkhad, Xukumada Somaliland waxay jabisay ,Fulina wayday Heshiiskii khaatumo